Usolwa ngokugula ngekhanda ogwaze wabulala izingane | News24
Usolwa ngokugula ngekhanda ogwaze wabulala izingane
Bangkok - Owesilisa wasenyakatho yaseThailand ugasele emzini kamakhelwane wakhe wafika wagwaza wabulala izingane ezinhlanu waphinde wagwaza walimaza owesifazane okhulelwe obebukela, ngokusho kwamaphoyisa ngoMsombuluko.
Amaphoyisa athe lo mlisa oneminyaka engu-24 ubudala unomlando ngokugula ngekhanda njengoba ebedla amaphoyisa engcindezi nokhwantalala.
Kubikwa ukuthi ucasulwe umsindo obuqhamuka kamakhalwane wakhe edolobheni yaseChiang Mai.
Lo mlisa okuvele ukuthi igama lakhe ngu-Azapa Sriwua ubephethe ummese wasekhishini ngesikhathi egasela ehlasela izingane, kusho okhulumela amaphoyisa uLieutenant Colonel Sombat Kalasuk esiteshini samaphoyisa saseChiang Mai.
OLUNYE UDABA: Umisiwe esikoleni oshaye isiqhwaga ngesibhakela
Amaphoyisa afice izidumbu ezine zezingane okukholwakala ukuthi zineminyaka engaphansi kwengu-8 ubudala.
Lezi zidumbu bezisedamini legazi kanti esinye sitholakale ngasemnyango okusolakala ukuthi besizama ukubaleka, kusho uSombat.
Owesifazane okhulelwe obesenezinyanga ezingu-7 ekhulelwe uphuthunyiswe esibhedlela wathola ukwelashelwa ukugwazwa